Donald Trump anorondedzera hondo paHuawei nekudzivisa chikamu mu US-TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Donald Trump anorondedzera hondo Huawei nekudzivisa marimi muUnited States
Xi Jinping naDonald Trump pamusangano munaNovember 2017
INTERNATIONAL- Hapana chinhu chinopfuura Tonton Xi naMuncle Donald. Anenge vhiki imwe mushure mekuwedzera kwemitengo yakawanda pane zvakawanda zvezvinhu zvakatengeswa kubva kuChina, mutungamiri weAmerica achangobva kurwisa huwandu hweChinese industry. Nzira iyi yakanga isinganzwisisiki asi zvinokurudzira pane zviri pachena.
Mumatambudziko, iyi Chitatu 15 inogona, mutungamiri weAmerica yakabudisa mutemo unorambidza terevhizheni dzeUnited States kuti dzipe midziyo kune makambani ekune dzimwe nyika anonzi ari pangozi. White House inovimbisa kuti zvinyorwa izvi zvicharamba zvichirwisana ne "maitiro anonyadzisa anofanirwa neIndaneti, kusanganisira hupfumi nehuwandu hwemabhizimisi kunoparadza United States nevanhu vayo."
Kana chirevo chacho chisingatauri nyika kana kunyange chakasimba, zvechokwadi, China uye kunyanya Huawei, iyo inonyanya kupiwa mhosva. Mutsamba, Dhipatimendi reUnited Commerce razivisa Chitatu kuti rakaisa kambani Huawei nevamwe gumi nevaviri urongwa hwemakambani anomiririra dambudziko kune kuchengeteka kwenyika.
Icho chisarudzo hachisi chaicho chakashamisika kuBeijing kana Huawei. "Kunyange pamberi peTrump, Washington yakaudza vashandi vayo kuti inofunga kuti Huawei njodzi yekuchengeteka, asi hutungamiri huripo hwaita kuti zvive chinhu chinokosha kuedza kudzivisa kuwedzera kweHuawei kune vashandi vavo, nokuti ane maonero anonyanya kukwikwidzana eChina, kunyanya panyaya yehupfumi ", inotora in Le Mondemuongorori Adam Segal, nyanzvi mune zvepamusoro-tech uye China
Beijing akakurumidza kuita, achityisidzira migumisiro
China, iyo yakanga yatanga kushora kushandiswa kwemasimba kubvisa makambani eChinese kubva kumakwikwi asina rusununguko, yakakurudzira Donald Trump musi weChitatu kuti afungisise nezvechisarudzo chake, "kuti arege kuwedzera kukanganisa kwehukama hwehupfumi uye pakati penyika mbiri, vakapindura pamusangano wehurukuro mutauri weChina Ministry of Commerce, Gao Feng.
Kune rumwe rutivi, Huawei vakatsoropodza "mitemo isingafungi ichapindira kodzero" dzeboka rechiChinese.
Vachango "chengetedza United States kuderedza dzimwe nzira dzinodhura" mu5G, chizvarwa chechishanu chekutengesa mafoni, yakanyevera kambani, iyo inozviratidza se "mutungamiri asina muvengi we 5G ".
Emmanuel Macron yakanga yakaparadzaniswawo pane zvaiitwa kunze kweVivaTech muParis. Mutungamiri weFrance akataura kuti "hazvina kukodzera" kuti "ipe hondo yekugadzirwa kwemazuva ano kana hondo yekutengeserana nenyika ipi zvayo ikozvino". Akawedzera achiti: "Maonero edu haasi kuvhiringidza Huawei kana imwe ikambani asi kuchengetedza kuchengetedza kwedu nyika uye hutongi hweEurope."
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.huffingtonpost.fr/entry/donald-trump-declare-la-guerre-a-huawei-en-interdisant-la-marque-aux-etats-unis_fr_5cdd3d7be4b01571365c8e81